Immortelle kuyisimo imbiza zisetshenziswa okuqondene Asteraceae. izindawo zayo ezibhekwa nenhlabathi ezomile sandy eRussia emaphakathi, eCaucasus naseSiberia. Hlangana okuphakade, ogama izithombe ezibonisa zonke ubuhle lesi sipho bemvelo, kungenzeka emasimini edlelweni e emahlozini, futhi amahlathi coniferous, izimpawu ukukhula kwaphela izihlahla. Izimbali zezitshalo Uthatha ngasekupheleni entwasahlobo isikhathi ukuba kuqale isizini ukuwa. Yokuvuthwa senzeka ngo-Agasti noma Septhemba.
Immortelle, ephulukisa izakhiwo iziphi kabanzi esetshenziswa abelaphi basendulo, antispasmodic, imiphumela eqeda ukuvuvukala futhi amagciwane emzimbeni. Futhi manje-ke zithandwa kakhulu njengendlela yokuthola lisetshenziswe abantu imithi e ukususa izifo eziningi. Izimbali immortelle, esetshenziselwa ukwenza umuthi, kuvuna ekuqaleni kwenkathi zezimbali nesomiso. Ziqukethe ukubunjwa yabo stearin kanye amafutha abalulekile, zombala kanye tannins, flavonoid, futhi inhlaka, nentukuthelo carotene, amavithamini K no C, kanye anhlobonhlobo amaminerali.
Immortelle, izakhiwo ekwelapheni asetshenziswa zokupheka odokotela lukaKhisimusi ukususa pathologies isibindi ipheshana biliary, izifo kwesinye nenyongo futhi Izitho zangasese zesifazane, rheumatism kanye sifo, ngokuvamile asetshenziselwa ngesimo infusions kanye Iziphungo. Siyabonga ukuba emzimbeni isinyathelo antispasmodic, ikhambi elithile lokwelapha uthola isicelo sokuba ukususwa zibe isimiso sokugaya ukudla bungene. Umhluzi wenza kusukela lesi sitshalo, ukusiza ukuthuthukisa motility emathunjini. Basuke Kunconywa ukuqunjelwa. Yini enye anezakhi okuphakade kwezokwelapha? Lena indlela ephumelelayo ukubuyisa, ubuhlungu emathunjini nesicanucanu. Ukusetshenziswa Its is ibuye Kunconywa izifo ngomgudu womchamo abese nezinso.
Immortelle, izakhiwo ekwelapheni asetshenziswa womshini ukuthaka imithi, isisekelo womshini izidakamizwa eziningana. Le mishanguzo ngeke lomisiwe ukungabekezelelani ngazinye izingxenye zabo abamelwe. ngokuqapha okukhulu kuyadingeka uma nithatha ukuba athobele leyo mikhuba abaphethwe nomfutho wegazi ophezulu. Akunconyelwe le mithi khona amatshe atholakala enyongweni. Ngesikhathi esifanayo, isibonelo, lesi sidakamizwa "Aristohol" enziwa eJalimane ngesisekelo izimbali okwelapha Helichrysum, ayinakho Izimo. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi izidakamizwa, ezibandakanya lokhu imbiza naphezu ubuthi bayo ongaphakeme, ngokufaka efaka emzimbeni ngenxa izifundo nokunwetshiwe yokwelapha ibe nomthelela ekubeni yokujama tsi of Bile esibindini.
Ngaphezu kwalokho ukusebenzisa in wendabuko imithi njengoba ikhambi, okuphakade uthola ukusetshenziswa kwalo basembonini yendwangu. Basuke ababethi umbala ophuzi lendwangu. Helichrysum isetshenziswa, futhi njengoba oxosha kazwelonke ku inundu edla izembatho iyobadla.
Imbali Linden: ephulukisa izakhiwo kanye nezindlela usebenzisa
Efihlekile Birch. Isicelo ekhaya
Indlela hlola Yakha Windows 10: izindlela eziyisisekelo